sneakers – OOTDMYANMAR
6 GUCCI SNEAKERS YOU NEED IN YOUR CLOSET
No Comments on6GUCCI SNEAKERS YOU NEED IN YOUR CLOSET
ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ဗီရိုထဲမှာရှိထားသင့်တဲ့ Gucci sneaker ၆ ရံ
Gucci is one of the hottest brands to wear right now. Beside from its innovative designs, Gucci combines unique and modern take on avant-garde aesthetic. Whether you opt for the classy style or you can pull off the maximalist sneaker style here are6Gucci Sneakers you’ll love to be in your closet:
Gucci ဆိုတာ လတ်တလော ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gucci က ဒီဇိုင်းအသစ်တွေဖန်တီးနေရုံတင်မကဘဲ avant-garde စတိုင်ကိုမှ ထူးခြားပြီးခေတ်ဆန်တဲ့ပုံစံကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်လာတာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Classic စတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Maximalist စတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် Gucci sneaker ၆ ရံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Gucci Ace $680
2. Gucci Rhyton $890
3. Gucci Ultrapace €790
4 Gucci Flashtrek €1005
5 Gucci Ace GG $630
6 Gucci Tennis 1977 sneaker $630
Tags Fashion, gucci, ootdmyanmar, sneakers